अष्ट्रेलियामा सातजना मानिसहरु मृत फेला
२०७५ बैशाख २८ शुक्रबार, काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको ग्रामीण क्षेत्रमा सात जना मानिहरुको शव फेला परेको स्थानीय प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार अष्ट्रेलियाको पर्थबाट २८० किलोमिटर दक्षिणमा रहेको ओस्मिंटनमा चार बालबालिका र तीन वयस्क मानिसहरुको शव फेला परेको हो । ... बाँकी अंश»
२०७५ बैशाख २८ शुक्रबार, काठमाडौं । १०४ वर्षीय वैज्ञानिक डेभिड गुडलले स्विट्जरल्याण्डको क्लिनिकमा स्वेच्छिक देहत्याग गरेका छन् । उनले सो क्लिनिकमा आफ्नो देहत्यागको लागि चयन गरेका हुन् । वातावरण र वनस्पतिको क्षेत्रको अध्ययनमा सक्रिय रहेका वैज्ञानिक कुनै पनि रोगले ग्रसित थिएनन् र उनले आफ्नो जीवनको सबै गुणहरुको मूल्यांकन गरी देहत्यागको निर्णय गरेका हुन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ बैशाख २७ बिहिबार, वासिङ्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका र उत्तरकोरियाली नेताहरूबीच हुने भनिएको लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको शिखर सम्मेलन आगामी जुन १२ मा हुने भएको छ। ... बाँकी अंश»
इरान सम्झौताबाट बाहिरिँदा अमेरिकालाई के फाइदा हुन्छ ?
२०७५ बैशाख २७ बिहिबार, एजेन्जी। भर्खरै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेका छन्। यो विश्वका धेरै मुलुकहरुले यो सम्झौताबाट बाहिरिनु ठिक नरहेको बताउँदै आएका छन्। इरान सम्झौता अमेरिकाको लागि निकै घातक रहेको ट्रम्पले बताउँदै आएका छन्। ... बाँकी अंश»
२०७५ बैशाख २७ बिहिबार, एजेन्सी। बुधबार उत्तर कोरियाले तीन अमेरिकी नागरिकलाई मुक्त गरेको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ उनीहरुलाई छुटाउनका लागि उत्तर कोरिया पुगेका थिए। उत्तर कोरियाले मुक्त गरेका तीन अमेरिकी नागरिकहरु एन्ड्रुस एयर फोर्सको विमानबाट अमेरिका पुग्नेछन् जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उनीहरुको स्वागत गर्नेछन्। ... बाँकी अंश»
महाथिर मोहम्मद र मलेसियाको विकास, यस्तो छ महाथिरको योगदान
२०७५ बैशाख २७ बिहिबार, काठमाडौं । मलेसियाको लागि महाथिर मोहम्द अहिलेसम्मका अपराजित नेता हुन् । उनले आफ्नो अपराजित यात्रा ९२ वर्षको उमेरमा पनि कायम राखे । यससँगै उनले बिहिबार विश्वको सबैभन्दा जेठो विजेता नेताको रुपमा कीर्तिमान पनि राखेका छन् । ... बाँकी अंश»
इजरायलमाथि इरानको सीधा रकेट आक्रमण, बढ्यो युद्धको खतरा
२०७५ बैशाख २७ बिहिबार, एजेन्सी । इरानले इजरायलमाथि पहिलापटक प्रत्यक्ष आक्रमण गरेको छ । विहीबार उसले सिरियाबाट इजरायलमा रकेट आक्रमण गरेको हो । यससँगै युद्धको खतरा मडारिएको हो । ... बाँकी अंश»
महाथिर विश्वकै सबैभन्दा जेठा विजेता नेता, फेरि बन्दै मलेसियाका प्रधानमन्त्री
२०७५ बैशाख २७ बिहिबार, काठमाडौं । आधुनिक मलेसियाका पिता पूर्वप्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मद विश्वकै सबैभन्दा जेठा विजेता नेता बन्न सफल भएका छन् । उनी ९२ वर्षको उमेरमा उम्मेदवार भई विजेता बनेका हुन् । उनी नै फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ । ... बाँकी अंश»
सि चिनफिङ बने विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति
२०७५ बैशाख २६ बुधबार, काठमाडौं । फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको सन् २०१८ को सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ पहिलो नम्बरमा देखिएका छन् । विवरणमा दोस्रो नम्बरमा रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन रहेका छन् । अघिल्लो वर्षको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिको रुपमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यस वर्षको लागि तेस्रो नम्बरमा झरेका छन् । ... बाँकी अंश»
कंगोमा फेरि देखियो इबोला, १७ को ज्यान गयो
२०७५ बैशाख २६ बुधबार, एजेन्सी । कंगोमा अघिल्लो वर्ष इबोला भाइरस उन्मूलनको घोषणा गरिएको भए पनि यस वर्ष फेरि पनि सो भाइरसको कारण १७ जना मानिसहरुको ज्यान गएको देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष पनि कंगोमा यो भाइरसको कारण आठ जना मानिसहरुको ज्यान गएको थियो । त्यसपछि मुलुकमा इबोला भाइरस उन्मूलनको घोषणा गरिएको थियो तर फेरि पनि इबोला भाइरसको कारण १७ जना मानिसहरुले ज्यान गुमाएको देखिएको हो । ... बाँकी अंश»
व्यापारिक तनाव कम गर्न दोस्रो चरणको वार्तामा बस्दै अमेरिका र चीन
२०७५ बैशाख २६ बुधबार, चीन र अमेरिकाको बीचमा जारी रहेको व्यापारिक तनाव कम गर्नका लागि उनीहरुको बीचमा दोस्रो चरणको वार्ता हुने भएको छ । पहिलो चरणको वार्तामा कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि उनीहरु दोस्रो चरणको वार्तामा बस्न लागेका हुन् । ... बाँकी अंश»
राहुल गान्धीको नयाँ योजना – १० वर्षमा काँग्रेसबाट १० महिला मुख्यमन्त्री
२०७५ बैशाख २६ बुधबार, बेंग्लोर । भारतीय काँग्रेस पार्टीका अधयक्ष राहुल गान्धीले १० वर्षमा आफ्नो पार्टीबाट १० जना महिला मुख्यमन्त्री बन्ने बताएका छन् । २०१९ को लोकसभा पोलमा अगाडि देखिएसँगै काँग्रेस आईका अध्यक्षले यस्तो दावी गरेका हुन् । उनले यस किसिमको योजना धेरै पुरुष वरिष्ठ नेताहरुलाई मन नपर्ने भए पनि आफू यसलाई कार्यान्वयन गराउने दिशामा अघि बढिरहेको बताए । ... बाँकी अंश»
ट्रम्प–किम वार्ताअघि पोम्पेओ उत्तर कोरियामा, यस्तो छ कारण
२०७५ बैशाख २६ बुधबार, वासिङटन । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ उत्तर कोरिया भ्रमणमा गएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोन उनको बीचमा वार्ता हुने तयारी भइरहेको अवस्थामा उनी बुधबार प्योंगयोङ पुगेका हुन् । ... बाँकी अंश»
इरान सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने, अब इरान के गर्छ ?
२०७५ बैशाख २६ बुधबार, वासिङटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसअघि बाराक ओबामाले गरेको इरान सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने निर्णय गरेका छन् । इरानसँग भएको न्युक्लियर सम्झौता तोड्दै अमेरिका उक्त सम्झौताबाट बाहिरिने भएको हो । ... बाँकी अंश»
क्यामेष्ट्रि फेरि मिल्यो पुटिन र मेदभेदेवबीच, बने प्रधानमन्त्री
२०७५ बैशाख २६ बुधबार, मस्को । रूसको संसदले पूर्व प्रधानमन्त्री दिमित्री मेदभेदेभलाई नयाँ कार्यकालका लागि भारी मत दिएर मङ्गलबार पुनः निर्वाचित गरेको छ । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई रूसी नेतृत्वमा लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका मेदभेदेभलाई रूसी संसद डुमाले भारी मतसाथ निर्वाचित गरेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । ... बाँकी अंश»
सी र किमबीच दोस्रो भेटवार्ता, प्योङयाङ र बेइजिङबीच बृहद विकासका अध्याय शुरु
२०७५ बैशाख २५ मंगलबार, दालिअन, चीन ।चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङ र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ अनबीच चीनको उत्तरपूर्वी राज्य लिआओनिङमा यही सोमबार र मङ्गलबार भेटवार्ता भएको छ । ... बाँकी अंश»
उत्तरी म्यान्मारबाट नागरिक विस्थापन रोकिएन
२०७५ बैशाख २५ मंगलबार, याङ्गोन । उत्तरी म्यानमारको एक क्षेत्रमा सेना र जातीय विद्रोहीबीच झडपहरु जारी नै रहेकोले नागरिक विस्थापित हुने क्रम रोकिएको छैन । विगतका केही महिनादेखि उक्त क्षेत्रमा जातीय विवाद चर्किएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ बैशाख २५ मंगलबार, नयाँदिल्ली । भारतको कर्नाटक राज्यका एक नेताकी छोरीलाई सर्वोच्च अदालतले पति तथा घरपरिवार त्याग्नका लागि अनुमति दिएको छ । उनलाई जबरजस्ती विवाह गराइएको पुष्टि भएसँगै उनलाई आफ्नो जीवनको तय आफैं गर्न पाउने अधिकार अदालतले दिएको हो । ... बाँकी अंश»
फस्ट लेडी मेलानियाले ल्याइन् यस्तो नयाँ योजना
२०७५ बैशाख २५ मंगलबार, वासिङटन । अमेरिकी फस्ट लेडी मेलनिया ट्रम्पले बालबालिकाहरुको लागि सहयोग हुने ‘बि फस्ट’ नामक नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात गरेकी छिन् । बालबालिकाहरुलाई सामाजिक, भावनात्मक कुराहरु तथा भौतिक स्वास्थ्यको विषयमा सहयोगको लागि यस किसिमको कार्यक्रम अघि सारिएको हो । ... बाँकी अंश»
लैङ्गिक दुव्र्यवहारमा फसे महान्यायाधिवक्ता, दिए राजीनामा
२०७५ बैशाख २५ मंगलबार, न्युयोर्क । अमेरिकाको न्युयोर्कका महान्यायाधिवक्ता एरिक स्नाइडरम्यानले राजीनामा दिएका छन् । उनीमाथि चार महिलाहरुलाई दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेसँगै उनले राजीनामा दिएका हुन् । ... बाँकी अंश»